EyeDwarha 17, 2018 admin
CME: umthamo avareji yemihla ngemihla Bitcoin amakamva bakhula 41% ku q3
imiqulu avareji yemihla ngemihla Bitcoin amakamva zokuthengisa wabona jump ebalulekileyo q3 kuthelekiswa ngexesha lokugqibela, ngokutsho CME Group. umthamo avareji mihla wenza 5,053 nezivumelwano Q3, phezulu 41% ukusuka 3,577 nezivumelwano q2. Lo mzobo kwakhona uphawula 170% kwanda ukusuka kwikota yokuqala 1,854 izivumelwano.
Kwakhona CME banike iinkcukacha kwi umdla evulekileyo, emele inani elipheleleyo kwezivumelwano bazigqwethele kokwabo ukutshabalala ezigcinwe ngabo ukurhweba kwimarike. Eli nani eyavela 1,523 izivumelwano ku Q1 ku 2,873 nezivumelwano Q3, emele nokwanda q2 ngayo 2,405. kwakhona, Tim McCourt, CME kaThixo kuMlawuli Ophetheyo kunye nentloko jikelele iimveliso equity kunye notyalo ezizezinye wathi “Out of the 40% of Bitcoin amakamva zokurhweba kwi CME leyo ngaphandle US, 21% evela Asia.”
in q3, Bitcoin amakamva avareji umthamo ngemihla wavuka 41% kunye nomdla sivulekile phezulu 19% phezu q2 . Funda indlela nxaxheba kwiimarike usebenzisa BTC ukulawula umngcipheko kwiimarike ukutshintsha. https://t.co/Yt41SzsHku pic.twitter.com/Kw4OX0QaKT
— CMEGroup (@CMEGroup) EyeDwarha 17, 2018
BitMEX uqala client software ukukhuphisana Bitcoin Core
Uphando ngengalo platform cryptocurrency yorhwebo BitMEX libhengeze ukuba liya kusungula owakho umxhasi wayo Bitcoin software ukukhuphisana ukuphunyezwa reference kunye nomgangatho kushishino Bitcoin Core. Avulwe kule veki kwisithuba elide kokuxoxa ekuhlengahlengiseni lokukhuphisana ngabaxhasi software, BitMEX Uphando wathi Wakhetha ukukhulula eyakho BTC umxhasi ayo ukuze kulungiswe ngokungaqondi open-source software yogcino Bitcoin Core olawula ekukhuleni cryptocurrency yaye "inamandla ezizodwa ukutshintsha okanye ukuthintela utshintsho imithetho Bitcoin xa kuvunyelwana."
BitMEX Research uthi, ukuba abasebenzisi kufuneka ibe ngabo ngokwenene ophethe imithetho cryptocurrency kaThixo protocol. client entsha lelo qela, igama Research Bitcoin BitMEX, ijolise kunciphisa ukuthembela uthungelwano ebhalwe program olunye yokugcina ngaphandle kokungenisa neengozi ezintsha eziphilayo. "Ekubeni ifolokhwe software ye Bitcoin Core, athwala namnye iingozi wokungabi bug ye bug ehambelanayo, ezifana Satoshi ikhathazekile,"Ababhali babhala. "Umxhamli BitMEX Uphando kwakhona ayitshintshi imithetho Bitcoin xa imvumelwano, ngoko iinkxalabo malunga chainsplits beyelenqe azisebenzi. ngoko ke, ukuba yogcino Bitcoin Core uva ipakwe okanye zisuswe, i codebase ungakwazi ukuphucula usebenzisa yogcino Bitcoin BitMEX Research. "
esemthethweni CFTC ulumkisa abayili smart contract phezu ikhowudi axelwe
Smart coders contract banokubekwa ityala ukuba ngabom ukusebenzisa iteknoloji blockchain ukudala imisebenzi ekuthatyathwa ngokuba axelwe “izivumelwano umcimbi,” ngokutsho komlawuli US. Brian Quintenz, uMkomishinala kwi-US ezityiwayo Futures Trading Commission, wachaza ukuba elandelwayo blockchain zivumela “abantu ukudala iikhontrakthi zabo smart yokuqikelela iziganeko elizayo ngokubanzi… Ngokwesiseko, ezi izivumelwano kuya kuvumela abantu ukuba babheje kwisiphumo iziganeko elizayo, ezifana wemidlalo okanye ukhetho, usebenzise imali yeloo digital. Ukuba ukuqikelela yakho ilungile, isivumelwano uhlawula ngokuzenzekelayo le lokuwina,” uthe.
Quintenz wahlabela mgama ukongeza ukuba iziganeko yezinto zokuphula, yena ukholelwa ukuba coders smart isivumelwano abakhi loo functionality ngaphezulu uthungelwano blockchain engase kubanjwa uxanduva kwaye atshutshiswe. “Ndicinga umbuzo efanelekileyo kukuba ingaba ezi ikhowudi ababhekisi ngokusengqiqweni ukuwubona, ngelo xesha wadala ikhowudi, ukuba ebeya kusetyenziswa ngabantu US ngendlela violative ngendlela lwemimiselo CFTC,” uthe. ngombandela, uthe, ikhowudi kuya kufuneka ukuba ube “olulungiselelwe ngokukodwa ukwenzela ukuba udidi ngqo lomsebenzi kulawulwa CFTC, yaye kwenziwa iinzame ukuthintela nokufumaneka kwayo abantu US.”
Apple uvulindlela Steve Wozniak iye co-wasungula lokutyala imali blockchain
Steve Wozniak, usomashishini osakhasayo tech kakhulu ngokuthi co-umsunguli Apple, ujoyine EQUI Global, fund mali yakhiwe besebenzisa ubuchwepheshe blockchain, njenge co-umsunguli. Wozniak wathi uya ahambe ukuba iinkampani zobugcisa ukufumana i "iinkwenkwezi obuchwepheshe" ngekamva. Wathi ke ukuba ufumana phezulu ezintsha rhoqo; kunjalo, oku kukuthi kwixesha lokuqala, emva Apple, ukuba uye wavuma ukuba inkampani.
I 'open-ended "fund EQUI iya kugxininisa abatyali-non-kwamaziko kunye neenkampani zobugcisa, ne kuphela 20% ukubekela bucala kwiinkampani non-tech ezifana nemihlaba kunye Collectibles zotyalo. Wozniak wathi yena ukholelwa iinkampani ezifana EQUI iya kuphazamisa ushishino VC kunye nokuvumela ezinye iinkampani ukuba zilandele imodeli entsha esekelwe zobuchwepheshe blockchain.
Ingxelo Daily Market Kraken for 16.10.2018
$112M wasebenza kuzo zonke iimarike namhlanje
Post Next:Crypto News 18.10.2018